မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: September 2008 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Undercover in Burma: investigating the Saffron Revolution
Source:(ABC-Australia) Special Report.
Undercover: Peter Cave interviewsastudent leader
It has now beenayear since Burma's military junta brutally put down the so-called Saffron Revolution led by thousands of Buddhist monks, demanding democratic and economic reform.
According to the United Nations, 30 monks and other protesters died, 74 people have never been accounted for and thousands were arrested.
The regime bans most foreign reporters, including those from the ABC, but foreign affairs editor Peter Cave went into the country asatourist to report for ABC Radio and Television on the anniversary.
As I disembarked from my flight into Rangoon's surprisingly modern and efficient airport, it was not withoutalittle trepidation.
Very few tourists are going to Burma these days and there were justahandful of western faces on the plane.
I hadatourist visa, but I was painfully aware thatasimple check of my name on Google by the Burmese embassy in Canberra, or by the security officials in Burma, would mean that I would be instantly arrested.
ABC cameraman Erik Havnen was coming in separately the next day, just in case one of us was stopped.
Each of us carriedasmall amateur video camera in our hand luggage. I hadalaptop computer carefully cleared of any contacts, programs and emails that might prove incriminating. Each of us hadabrand new passport with no journalist visas.
The end entry was surprisingly easy, straight through immigration and no baggage check at customs.
I hadapre-arranged meeting with our Burmese fixer at the hotel we had booked throughaBangkok travel agency. The fixer's job is to help with translations, lining up interviews and providing the sort of local knowledge essential not to draw suspicion.
He had been lined up by the ABC's Bangkok office through carefully worded phone calls to provideatourist service foraMr Peter, who would be inacertain hotel lobby atacertain time.
All I knew was the name he used - Johnny. He came well-recommended and knew we neededadependable car and driver.
My task on day one was to act likeatourist taking lots of touristy pictures to have in the camera in case we were stopped.
At the same time I had to shootalot of overlay, the pretty pictures which help flesh outatelevision story, and to check out the lie of the land.
I sat in the hotel lobby. Nobody looked like an undercover fixer, so Johnny was either good at his job or not there.
I quickly briefed him on the interviews I wanted: A monk involved in last year's demonstrations andastudent leader.
I also wanted to interviewamember of the so-called '1988 generation', who took part in the demonstrations which were put down with tanks and guns, with the loss of more than 3,000 lives.
In addition, I needed an interview with an official of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy. It wasatall order but within an hour it had all been arranged.
The monk however could only do the interview within the next few hours. He would leave his monastery in plain clothes to avoid the security forces on watch there.
He would change cars twice and then don his saffron robes in the relative safety of my hotel room.
Erik was still not due forafew hours so I would have to shoot the interview myself, withoutatripod or proper microphone. Thankfully Johnny had another skill - he knew how to operateavideo camera.
The monk arrived in jeans andaT-shirt, his shaven head concealed underahat. He disappeared into my bathroom and emerged minutes later in saffron robes.
The interview was conducted quickly and the memory card containing the sound and vision quickly removed and hidden. That would be the standard procedure for the next few days. No incriminating footage was ever left in the camera.
The interviews with the student leaders were more problematic.
The Burmese Junta has spies and informers everywhere but again, Johnny hadaplan. He would arrange an excursion toawildlife reserve in the jungle an hour's drive from Rangoon and the interviewees would meet us there.
Erik was now in town, having successfully evaded detection at the airport.
We already had plenty of street shots, including shots of the breathtaking Shwedagon Pagoda in the heart of Burmese Buddhism. We had even managed to secretly film the security forces at work fromamoving car.
The drive to the wildlife reserve provided some shots of huge stacks of teak logs ripped from the jungle and awaiting export for the further enrichment of the military Junta.
But when we got there, Johnny and the interviewees were tense. In the clearing we had chosen for the interview wereayoung couple onamotorbike.
I soon discovered the reason for the tension, as Johnny explained that only members of the security forces were allowed to ownamotorbike and the young man was clearly an off-duty soldier.
Luckily the couple soon moved on and the interviews were safely recorded and quickly hidden away.
The interview with the politician was again conducted inahotel room. All that was left now was to record the piece to camera and hereamonsoonal downpour came to our aid.
Erik sat in the front passenger seat of our car and filmed me talking in the back seat as we drove through central Rangoon, the windows misted with rain which also kept the police and their undercover spies off the streets.
Our job was finished and thankfully, airport security was as lax going out as it had been coming in.
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားပြည်သူပြည်သားတိုင်း ဆင်ခြင်သင့်တဲ့အတွေးအခေါ်တရပ်ပါပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြောရရင် လူသားတိုင်းရဲ့အရေးဟာလူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ကြောင်း ခံယူနိုင်ကြစေချင်ပါတယ်....
လက်ရှိအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးအောက်မှာ မိမိကိုတိုက်ရိုက်မထိသေးလို့ မိမိနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မှတ်ထင်နေပြီး နိုင်ငံ့အရေးကို ခေါင်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေ သန်း၅၀ကျော်ရှိပါတယ်။အာဏာရှင်ဆိုတာ သူ့အာဏာခိုင်မြဲဖို့အတွက်လိုအပ်လာရင်
ကြွက်ဟာ အက်ကွဲနေတဲ့ အုတ်နံရံ ကြားကနေ လယ်သမား လင်မယား၊ အထုပ်တစ်ထုပ် ဖြေနေတာကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေလေရဲ့။ အထဲမှာ ဘာမုန့်များ ပါလေမလဲ လို့ စိတ်ထဲက မျှော်တလင့်လင့်နဲ့ ကြည့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ စိတ်ပျက်စွာ မြင်တွေ့လိုက်ရတာက ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု။ လယ်သမားကြီးဟာ အိမ်ထဲက တစ်နေရာမှာ သွားချထားလိုက်တယ်။ အဲဒါကို မြင်လိုက်တဲ့ ကြွက်ဟာ အားရပါးရ အော်ပြီး လယ်ကွင်းထဲ ပြေးထွက်သွားတယ်။ အားလုံးကို သိစေချင်လို့ အသိပေးတဲ့ သဘောပေါ့။ အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ်ဗျို့၊ အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ်ဗျို့။ မြေကြီးကို ခြေထောက်နဲ့ ယက်ပြီး
အစာရှာနေတဲ့ ကြက်ဖကြီးက ခေါင်းမော်ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်တဲ့ လေသံနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ငါ့အတွက်တော့ အလကားပါ။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ငါ့ ခေါင်းလာမရှုပ်နဲ့ကွာ။
ကြွက်က ၀က်ဘက်ကို လှည့်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် တစ်ခု ရှိတယ်ဗျ။ လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ၀က်က ကရုဏာသက်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာက အတော်လေးကို စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ တကယ်တော့ ကျနော်အနေနဲ့ ခင်ဗျားကို
ဆုတောင်းပေရုံက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ သေချာတာတစ်ခုက ခင်ဗျားအတွက် ကျနော် အမြဲ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
ကြွက်က နွားဘက် လှည့်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ကြွက်ထောင်ချောက် ရှိတဲ့ အကြောင်း ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ နွားက ၀ိုး ... ၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် နှာခေါင်းကိုတော့ ညှပ်စရာ အကြောင်း မရှိဘူးလေ။ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
တစ်ညတော့ ဗြောင်း ဆိုတဲ့ အသံက အိမ်ထဲမှာ အတော်လေး ညံသွားတယ်။ အကောင် တစ်ကောင်ကောင်ကို ညှပ်မိလို့ ကြွက်ထောင်ချောက်က မြည်တဲ့ အသံလိုပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသမီးကြီး ဘယ်လိုမှ မသက်သာနိုင်ဘဲ ကွယ်လွန်သွားရှာတယ်။ နာရေးမှာ လူအတော်များများ အသုဘရှု လာကြတယ်။
လာသမျှလူတွေကို ဧည့်ခံဖို့ လယ်သမားကြီး ခမျာ လောက်ငှအောင် အမဲသားဟင်းကို စီစဉ်ရတော့တယ်။
နောင်တစ်ချိန် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါ ငါနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ တွေးလိုက်မိရင် ... သတိရပါ။ ကျနော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဟာ ခြိမ်းခြောက် ခံနေရပြီ ဆိုရင် အဲဒီ အန္တရာယ်ဟာ ကျနော်တို့ အားလုံးအပေါ် ကျရောက်လာတာပဲ။ တခြားသူတွေ အပေါ်မှာ မျက်စိဒေါက်ထောက်ပြီး ဂရုတစိုက် ရှိသင့်သလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လည်း အားပေးပြီး အစွမ်းကုန် ကူညီတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ ဘ၀လို့ ခေါ်တဲ့ ခရီးစဉ်ထဲက တစ်ဖောင်တည်းစီး ခရီးသွားဖော်ချင်း အတူတူပါ။
ဒါကတော့ တောင်အာဖရိက ကနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စ်မွန်တူးတူးရဲ့ စကားပါ။
ရှေ့ကပုံပြင်နဲ့မတူပေမယ့် မဆိုင်သလိုနေတဲ့သူတွေအတွက် ဥပမာပေးရာမှာတော့ နီးစပ်မှုရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သူပြောသမျှ ဆုံးမစကားတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ခုထိမှတ်ထားတဲ့စကားတခွန်းကတော့
"တာဝန်သိသူမှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်" တဲ့
လူသားတိုင်းမှာ မိမိလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူသားထုတရပ်လုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊လူအခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းသိကြပါစေဗျာ...။။။။။။။။။။။။။။
The Etrademyanmar website is an attack site as reported by the security program. They try to steal your private information. Be careful! check the attached file for the information provided by our security.
မြန် မာ ပြည် ကို အ မှန် တစ် ကယ် ချစ် သော အာ ဇာ နည် တို့ရှောင် ကျဉ် ရ မည့် 
( အ ကု သိုလ် သ စ္စာ )
အ ကု သိုလ် သ စ္စာ ၏ အ ကျဉ်း သ ဘော မှာ ၊( ဤ လော က ၌ ဘယ် သူ သေ သေ င တေ မာ ပြီး ရော ) ဟူ သော ခံ ယူ ချက် ဖြစ် ပါ သည် ။
အ ကု သိုလ် သ စ္စာ ရှင် များ သည် လု ယက် ယူ င င် ၍ စီး ပွါး ဥ စ္စာ ကို ရှာကြ ပါ သည် ။ လိမ် ညာ ဟန် ဆောင် ၍ လော က ၏ ပူ ဇော် သ က္ကာ ရ ကို ၊ ရှာ ကြ ပါ သည် ။ လူ ကြီး သူ မ များ ကို ဆန္ဒာ ဂတိ လိုက် အောင် ဖြား ယောင်း ၍ ရာ ထူး ဂုဏ် သိန် ကို ရှာကြ ပါ သည် ။ တာ ၀န် နှင့် ရ ပိုင် ခွင့် တွင် ၊တာ ၀န် ကို လုံး ၀ မ ယူ ပဲ ၊ရ ပိုင် ခွင့် ကို သာ ၊ အ မိ အ ရ ဆုပ် ကိုင် ၍ ၊ လုပ် ဖေါ် ကိုင် ဖက် များ မှ ၊ အ ရှက် အ ကြောက် ကင်း မဲ့ စွာ ၊ ထွက် ခွါ ၍ မိ မိ ၏ သက် သာ ရာ သက် သာ ကြောင်း ကို ရှာ ကြ ပါ သည် ။ သူ တော် ကောင်း ယောင် ဆောင် ၍ ကိုယ် ကျိုး စီး ပွါး ကို ရှာ ကြ ပါ သည် ။ ဂ ရု ဏာ ရှင် ယောင် ဆောင် ၍ ကိုယ် ကျိုး ၊ ကိုယ့် စီး ပွါး ကို ရှာ ကြ ပါ သည် ။
ဤ သည် တို့မှာ အ ကု သိုလ် သ စ္စာ ရှင် များ ၏ လုပ် နည်း လုပ် ဟန် များ ဖြစ် ပါ သည် ။ ဤ လုပ် နည်း လုပ် ဟန် များ အ တိုင်း လိုက် နာ ဆောင် ရွက် လျှင် လူ့လော က ၌ ၊
( အ သက် မွေး မြူ မှု လွယ် ကူ ကြောင်း ) ဗု ဒ္ဓ စာ ပေ ၌ ဤ သို့တွေ့ရ ပါ သည် ။
( သု ဇိ ၀ံ အ ဟိ ရိ ကေ န ၊ ကာ က သူ ရေ န ဓံ သိ နာ ။ ပ က္ခ န္ဒိ နာ ပ ဂ ဗ္ဘေ န ၊ သံ ကိ လိ ဋ္ဌေ န ဇီ ၀ိ တံ ။ )
အ ဟိ ရိ ကေ န = အ ရှက် အ ကြောက် ကင်း မဲ့သ ဖြင့် လည်း ကောင်း ။
ကာ က သူ ရေ န =ကျီး ကဲ့ သို့လု ယူ ရဲ သ ဖြင့် လည်း ကောင်း ။
ဓံ သိ နာ =သူ တ ပါး ပျက် စီး အောင် ချောက် တွန်း သ ဖြင့် လည်း ကောင်း ။
ပ က္ခ န္ဒိ နာ = အ ခွင့် အ လမ်း သာ ယာ သို့ပြေး ၀င် သ ဖြင့် လည်း ကောင်း ။
ပ ဂ ဗ္ဘေ န = ။ ရက် စက် သ ဖြင့် လည်း ကောင်း
သံ ကိ လိ ဋ္ဌေ န = အ ကု သိုလ် နည်း လမ်း ဖြင့် လည်း ကောင်း ။
ဇီ ၀ိ တံ = အ သက် မွေး သည် ရှိ သော် ။
သု ဇီ ၀ိ = အ သက် မွေး မှု လွယ် ၏ ။ ( ဓမ္မ ပ ဒ - ၁၈ ၊ ၆ ၊ ၂၂၄ )
ဆ ရာ ကြီး ဦး ရွှေ အောင် ၏ အ တ္တ ၀ါ ဒ မှ အ န တ္တ ၀ါ ဒ သို့ခ ရီး စဉ် စာ အုပ် မှ ကောက် နှုတ် တင် ပြ ပါ သည် ။
20th - UploadaDocument to Scribd
Posted by အာဇာနည် at 9:29 PM0comments
You, Your family and friends are cordially invited to our 8th Patthana festival for5days from Oct 15 to Oct 19, 2008 and Sangha-Pawarana Pwe at Azusa Monastery.
Please open attach.
Azusa , California 91702,
Posted by အာဇာနည် at 9:01 PM0comments
First Anniversary of Burma's saffron revolution- New York
Burma Dissidents Mark one Year Anniversary (၂၇။၉။၂၀၀၈)
Today marked the first anniversary of the ruling militarys bloody crackdown on democracy in Burma. Buddhist monks and dissidents in Thailand and activists in the Philippines are calling for the junta regime to stop using repressive measures against its people.
This is the small village of Mae Sot on the border with Thailand. Dozens of monks, dissidents and protesters are here to pay tribute to the victims killed one year ago.
Many of these dissidents were involved in those anti-government protests. What is still clear for them is they are still prepared to fight and die for democracy in Burma.
[Pan Chor, Dissident]:
"Although more people might have to die, we still demand democracy in Burma. We will demand it until they uphold democracy in the country."
And over in the Philippines dozens of activists were outside the Burmese Embassy in Manila. The Members of the Free Burma Coalition say the military junta should stop using brutal and repressive measures against its people.
[Egoy Bans, Free Burma Spokesperson]:
"To call for an immediate end to the crackdown that has been continuing since day 1 of the attack against the Saffron Revolution last year."
The Coalition says the numbers of political prisoners has doubled since last year. They are seeking help from the United Nations and the Association of Southeast Asian Nations to get the prisoners released.
[Gus Miclat, Free Burma Organizer]:
"To the government, they should heed the voices of their people. They're peaceful monks, they're peaceful citizens, and that is why we're here to help ventilate that voice and that message."
Onaside note, the country's state run media says bomb squad officers have found and defusedabomb in the capital city of Rangoon. Another bomb exploded yesterday injuring seven people. There is speculation that the military could have planted the bombs to justify having heavy security in the city.
Posted by အာဇာနည် at 3:39 AM0comments
င်္from CNN video
Posted by အာဇာနည် at 3:21 AM0comments
Hunger and child labour on the rise in Myanmar - 27 Sep 08
A year on from the Saffron revolution, the people ofaonce-prosperous nation are still mired in poverty.
According to the United Nations, the average daily pay in Myanmar is $0.67.
Al Jazeera's correspondent inside Myanmar assesses the situation in the country,ayear after the military government stamped out pro-democracy protests
Al Jazeera's သတင်းမှ
Posted by အာဇာနည် at 3:06 AM0comments
အော်..လူတောင်မျိုးပြုန်းသတ်နေမှ..ဇီဝမျိုးစုံ နဲ့ တိရိစ္ဆာန်လောက်တော့ နအဖက သတ်မှာ..မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲပေါ့။ ရှိရှိသမျှ သယံဇာတ တွေ နအဖက ကုန်အောင် စားရုံအောင်တောင်မက..ရေက ထွက်မဲ့ လျှပ်စစ်တောင် မသုံးရတာ.ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေပါဗျာ။ မပြောမရှိနဲ့ လက်ဦးဖို့ တော့ လိူပြီဗျို့ 
နယူးဒေလီ။ ။ အကယ်၍ စစ်အစိုးရသာ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရန် ဆည်များကို ဆက်လက် ဆောက် လုပ်မည် ဆိုပါက မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း သံလွင်မြစ်တွင် ရှိသည့် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်တော့မည့် အန္တရာယ် ရှိနေ သော အပင်နှင့် တိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်မှာ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်သွားတော့မည့် အန္တရာယ် ရှိ နေသည် ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အစီရင်ခံစာသစ် တခုက ဆိုပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကရင်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး ဆောင်ရွက်မှု ကွန်ရက် (KESAN) ၏ “ခိုးကေး - ဇီဝမျိုးစုံမှု အန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတွင် စစ်အစိုးရကသံလွင်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက် ရန် အဆိုပြုထားသည့် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး ရေကာတာများသည် ဇီဝမျိုးစံမှုကို အန္တရာယ် ကျရောက်စေနိုင်ကြောင်းဖြင့် ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါသည်။
"သံလွင်မြစ်ပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်မဲ့ ရေကာတာတွေက ဂေဟစနစ်ကို ပျက်စီးစေမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒေသတွင်းတွေ့ရတဲ့ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်မဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ မျိုးစိတ် ၄ဝ ကျော်ကိုလဲ ပျောက်ကွယ်သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု KESAN ၏ ကိုယ်စားလှယ် တဦးဖြစ်ပြီး သောကြာနေ့က ဘန်ကောက်မြို့တွင် အဆိုပါ စီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ သူ ကိုရွှေက မဇ္ဈိမကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာသည် မြန်မာနိုင်ငံ သံလွင်မြစ်၏ ဇီဝမျိုးစုံမှုကို ပထမဆုံး အသေးစိတ် ကွင်းဆင်း လေ့လာ ထားသည့် အစီရင်ခံစာ တစောင်ဖြစ်ပြီး၊ ဒေသခံနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား သုတေသီများက အထူး သဖြင့် ရေ ကာတာ ဆောက်လုပ်ရန် အဆိုပြုထားသော နေရာတခု ဖြစ်သည့် “ဝဲကြီး” ဒေသတွင် သွားရောက် သုတေသနပြု လေ့လာထားချက်များ ဖြစ်သည်။ ထိုရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရန် မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ထိုင်း နိုင်ငံ နှင့် သဘောတူညီချက် စာချုပ်တရပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဝဲကြီး ရေကာတာသည် ဆောက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါက သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာများအနက် ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ “တာဆန်း” ရေကာတာပြီးလျှင် ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေကာတာဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပြီး အနိမ့် ဆုံးလျှပ်စစ် စွမ်းအား မီဂါဝပ် ၄ဝဝဝ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
"ဒီလောက် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်လုပ်နိုင်ဘို့ အတွက် မြစ်ညာမှာ ကီလိုမီတာ ၃၈ဝ လောက် ရေမြှုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ကိုရွှေက ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြစ်ကြေပိုင်းတွင်လည်း ဇီဝမျိုးစုံမှုကို ဖျက်ဆီးပစ် မည့်အပြင် ရေများ ခန်းခြောက်သွားပြီး စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အကြီးအကျယ် ရေသွက် ရှားပါးမည့် အန္တရာယ် ကိုလည်း ကြုံတွေ့ရမည်ဟု ဆိုပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအဖြစ် ဆောက်လုပ်မည့် သံလွင်မြစ်ပေါ်ရှိ အဆိုပါ ရေကာတာ များသည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားများ၏ အဆိုအရ အရှေ့တောင်အာရှတွင် တခုတည်း ကျန်တော့ သည့် အတားအဆီး မရှိ စီးဆင်းနေသည့် မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာများ ဖြစ်ကြပါသည်။
စစ်အစိုးရကမူ အဆိုပါ ရေကာတာများကို တရုတ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ အကူအညီဖြင့် ဆက်လက် ဆောက် လုပ်သွားရန် သံန္ဓိဌာန် ချမှတ်ထားပြီး ထုတ်လုပ်ရရှိမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား များကိုလည်း တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တို့ကို ရောင်းချရန် သဘောတူထားပြီး ဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့ သုတေသန တွေ့ရှိချက်တွေအရ ဒီရေကာတာတွေက ထုတ်ယူရရှိမဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အများစုက တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့သွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ရာခိုင်နှုံး အနည်းငယ်လောက်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာ သုံးမှာ၊ ဒါတောင်မှ အဲဒီထဲက စစ်တပ် အခြေခံစခန်းတွေကို ခွဲပေးရဦးမှာ" ဟု ကိုရွှေက ဆက်လက် ပြောကြားသွား ခဲ့ပါသည်။
ရေကာတာများ မဆောက်လုပ်မီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု အကဲဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရန် နှင့် အသေးစိတ်၍ ပြည့်စုံ သော ဇီဝမျိုးစုံမှု သုတေသနတရပ်ကို ပြုလုပ်ပါရန် ဤအစီရင်ခံစာက မြန်မာ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံ တင်ပြ တိုက်တွန်း ထားပါသည်။
ထို့ပြင် သံလွင်မြစ်တလျှောက် နေထိုင်ကြသော ဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် ရေကာတာနှင့် ယင်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများမှ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရှေးဦးစွာ ရယူခံစားခွင့်ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်လည်း အစီရင်ခံစာ တွင် ဆိုထားပါသည်။
"ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမား တယောက်အနေနဲ့ ဒီရေကာတာတွေ ဆောက်လုပ်တာကို ကျနော်တို့ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရက ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ ဇီဝမျိုးစုံမှု (biodiversity) နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ နောက်ထပ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ရေကာတာတွေ မဆောက်ခင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ ကိုလဲ အကဲဖြတ် လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဘို့ လိုပါတယ်" ဟု ကိုရွှေက ပြောကြားသွားခဲ့ ပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 9:48 PM0comments
Vbsw Bomb Case - UploadaDocument to Scribd
Computer Guide Written by Burmese - UploadaDocument to Scribd
Posted by အာဇာနည် at 9:15 PM0comments
စိတ်တော့ ပျက်ပါနဲ့ဗျာ..UN လည်း လိပ်လိုတော့ လှုပ်စိ လှုပ်စိ ပြေးနေပါသေးတယ်
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေးမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရဲ့ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီတို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဖို့ ရှိပါတယ်။ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေရမယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michele Montas) က ပြောသွားတာပါ အခု မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေးဆိုတာက ၀န်ကြီး အဆင့် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်မယ့် ပထမဆုံး အကြိမ် အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါ တယ်။ ဒီအစည်းအဝေးမှာ အာရှနိုင်ငံတွေ အများစု တက်ရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အရင်ကတည်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ သြစတြေးလျ၊ ဥရောပ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေး၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စကာင်္ပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေ ပါဝင်တဲ့ မြန်မာ့ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံများ အစည်းဝေးကို ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အရင်က ဒီနိုင်ငံတွေက သံတမန်တွေ မကြာခဏ မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါတယ်။ အခုတော့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ကျင်းပနေတဲ့ ကာလမှာ ညီလာခံ အစီအစဉ်ပြင်ကနေ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပတာပါ။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ အာဆီယံ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလည်း လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စနေနေနေ့ည သန်းခေါင်အချိန်လောက် ဖြစ်မယ့်၊ နယူးယောက်မြို့ စံတော်ချိန် မနက် ၁၁ နာရီခွဲမှာ ကျင်းပမှာပါ။ ကျနော်တို့ အခုည ဒုတိယပိုင်း အသံလွှင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ စမှာပါ။ တစ်နာရီကျော် ကြာပါလိမ့်မယ်။ အစည်းအဝေးက တံခါးပိတ် ကျင်းပ မယ့် အစည်းအဝေးပါ။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့အခါ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ သတင်းထောက်တွေ မေးတာတွေကို ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောထားပါတယ်။ ဒီ အစည်းအဝေး ကျင်းပတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက အလေးထားပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသတဲ့အ နေနဲ့ ၀န်ကြီး အဆင့် အစည်းအဝေး ကျင်းပတာလို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။
အဲန်အယ်လ်ဒီ အနှစ် (၂၀) ပြည့် အဖွဲ့ဝင်တချို့ အဖမ်းခံရ အဲန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချထားတဲ့ကြားက အဲန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေ ကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တချို့ လည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ထိုင်း အခြေစိုက် သတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေး မာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
“ဒီနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပတာပေါ့။ အခမ်းအနားပြီးစီးသွားတယ်။ လုံခြုံရေးအခြေအနေ ပြောရင်တော့ အင်အားအတော်ကို များတယ်။ အန်ကယ်တို့ ရုံးဝန်းကျင်မှာ ဒိုင်နာကားနဲ့ အရပ်ဝတ်နဲ့ လာတာ လေး-ငါရာ ရှိတယ်။ ဘာတွေလဲတော့ မသိဘူး၊ တာဝန်ရှိတဲ့သူလား၊ တာ ၀န် မရှိဘဲနဲ့ လာတဲ့သူတွေလား၊ မသိဘူး။ အဲဒါ တချက်၊ ထက်ထက်ဦးဝေရယ် ဒေါ်ရှမ်းမရယ် ရွှေပြည်သာက၊ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ အားလုံး ခြောက်ယောက်က မနက် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကိုအလာ ရုံးနားမှာအရောက် ကားဂိတ်နားမှာ အဖမ်းခံရတယ်လို့ ကြားတယ်။ နောက်ထပ် အခမ်းအနားအပြီး ပြန်တဲ့အထဲမှာ အမျိုးသမီးသုံးယောက်ကို ကားပေါ် စွဲတင်ပြီး ဖမ်းသွားတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒါ စုစုပေါင်း မနက် ခြောက်ယောက်၊ ညနေ သုံးယောက်၊ ကိုးယောက်။ နာမည်ကတော့ အဲဒီ နှစ်ယောက်ပဲ သိရတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မသိရသေးဘူး။”
မကြာခင်က လွတ်မြောက်လာတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် အဖွဲ့ချုပ်ဝင် သုံးယောက်ကို ဒီနေ့ အခမ်းအနားမှာ မူလ နေရာမှာ ပြန်လည် တာဝန်ယူပေးဖို့အတွက် အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌက ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဦးဝင်းတင် ကလည်း ပြန်လည် လက်ခံခဲ့တယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
Posted by အာဇာနည် at 3:56 AM0comments
ရန်ကုန်မြို့ အန်အယ်လ်ဒီ ဌာနချုပ်တွင်ပြုလုပ်သော ပါတီထူထောင်သည့် အနှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်းအနား၌ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးကို အာဏာပိုင်တို့ က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
“ဘာအပြစ်မှမရှိ၊ ဘာမှမလုပ်ရဘဲ ဖမ်းတာကတော့ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းတာပဲ၊ ဒါမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ တကယ်ကို အကြပ်အတည်းတွေနဲ့ကြုံပြီး အချင်းချင်း ပြန်လည်သွေးစည်းညီညွတ်ရမယ့်အချိန်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်မျိုးမှာ ဒီလို ဖမ်းတာဆီးတာ၊ ရိုက်နှက်တာတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
Posted by အာဇာနည် at 3:30 AM0comments
Posted by အာဇာနည် at 3:28 AM0comments
ဗုံး စနက်တံဖြုတ်တဲ့ကိစ္စ ..ရဲကသိမလားဗျ..တကယ်တမ်းကျ..မိုင်းရှင်းစစ်သားတွေ ဘဲတတ်မှာပေါ့ သူ့ စစ်သားက ချမကြွေးရဲဘူး..
ဒိုင်းနဲ့ ရဲကျ သေပေစေတဲ့ တယ်တော်တဲ့ နအဖ ဗျာ
ကျောက်တံတားရဲများ ဗုံး စနက်တံဖြုတ်ရန် ကြိုးစားနေ
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတာကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တောင်းဆိုထားတာကို ကုလသမဂ္ဂဘက်က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့က ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်းက ပြောပြသွားတာပါ။http://voanews.com/burmese/2008-09-27-voa6.cfm
Posted by အာဇာနည် at 3:15 AM0comments
Felicitation letter to 20th Anniversary of NLD by FDB
သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 26 2008 10:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ်ဝင် ၃၅ ယောက်တို့သည် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ် အချိန်တွင် နေအ်ိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ဘက်သို့ စတင်သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စစ်အစိုးရက ကုက္ကိုင်းလမ်း ပိတ်လိုက်သော်လည်း ချီတက်သွားကြသူများ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှိရာ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ လမ်းထဲကို ၀င်ရောက် သွားနိုင်ခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်း သတင်းများအရ သိရသည်။ လူငယ် အယောက် ၂၀ နှင့် လူကြီး ၁၅ ယောက် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တော်တော်နောက်တဲ့ ဦး ၀င်းထိန်ဘဲဗျာ. ခင်ဗျားနှယ်...နေနေကျ...ကသာထောင်က အခန်းလေးကို လွမ်းလို့ တဲ့ဗျာ၊ လွှတ်ပြီးခါမှ ထောင်ပိုင်မသိအောင် တံတိုင်းကျော်...ထောင်ထဲပြန်ခိုးဝင်တာပါ တဲ့..
( နအဖ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျ ပြောမဲ့ ဆင်ခြေပေါ့ဗျာ..)
ကဲ ဦး ၀င်းထိန်ရေ..
နောက်တခါလွှတ်လို့က နောက်ကျတဲ့ခြေထောက်..သစ္စာဖောက်ဘဲဗျို့ ..ပြေးသာပြေး..လွတ်အောင်။ မပူပါနဲံဗျာ..သ်ိပ်မကြာတော့ပါဘုး ဒင်းတို့ ပြာနေပါတယ်။
သန်းရွှေဆို..လက်ကတီးက ချွေးယိ်ုတာနဲ့တင်..သေလို့ရနေပါပြီ..မုန်တိုင်းအကူ ခိုးထားရတဲ့ ဘီစကစ်ဝါးနေလို့ သာ အသက်မထွက်သေးတာဗျို့ 
သူ့အဖေကြီးတရုတ်လည်း နို့ မှုန့် ကြောင့် ပြာနေတာ..
ထောင်မှလွတ်လာပြီးမှ ပြန်အဖမ်းခံရသည့် ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာထောင်၌ ပြန်လည် အကျဉ်း ကျ ခံနေရသည်ဟု ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်၏ မိသားစုက ခေတ်ပြိုင်သို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့က ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ခဲ့သည့် ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်၏ ဇနီးဖြစ်သူက "အန်တီက မန္တလေးပဲ ရောက်သေးတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းရမှာဆိုတော့ လောလောဆယ်တော့ အန်ကယ်လ်က နဂိုနေရာမှာပေါ့နော်။ အန်တီတို့က ထောင်ဝင်စာ သဘောမျိုး သွားတွေ့တာပဲရှိတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့တယ်လို့ ဒါပဲပြောလို့ရသေးတယ်။ အန်တီအချိန်မရလို့ပါ" ဟု ပြောသည်။
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် စက်တင်ဘာ (၂၃) ရက်က အကျဉ်းသား (၉၀၀,၂) ဦးကို စစ်အစိုးရက ပြန်လွှတ် ပေးရာတွင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် အမတ်များဖြစ်သည့် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ စသူတို့နှင့်အတူ ပြန်လွတ်လာပြီး နေအိမ်သို့ပြန်မရောက်ခင် ကသာမြို့ရှိ ဧရာ ဟိုတယ်၌ ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အတွက် ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ကို အာဏာပိုင်များက ပြန်ဖမ်းသည်ကိုမူ ယခုထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
ထောင်မှပြန်လွတ်လာပြီးကာစပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒီဗွီဘီ အသံလွှင့်ဌာနနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းတွင် ဗိုလ်ကြီးဝင်း ထိန်က လူတိုင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တဖက်စောင်းနင်း မလုပ်သည့်နိုင်ငံရေး၊ မျှမျှတတ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗိ်ုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးအဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး ၁၉၉၆ မေလ တွင် နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များကို မဟုတ်မမှန် သတင်းပေးပို့သည်ဆိုသော စစ်အစိုးရ၏ စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် (၁၄) နှစ် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည်။ စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း သူရဦးတင်ဦး၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
မှန်တာပြော..မှန်တာတောင်းဆိုလို့ကတော့ နအဖ က ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း.ဘဲ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူ၍ ၂၀၀၈ ခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြန်လည်သုံးသပ်ကြရန် ကမ်းလှမ်း ထားသည့် ကြေညာ ချက်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းရန် ရဲချုပ်၏ တောင်းဆိုမှုကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီက လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန်လိုက်ကြောင်း ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန် အယ်လ်ဒီ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေအပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် (၆) ဦးကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန ၌ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ကာ ခေါ်ယူ သတိပေး သည့်အပေါ် အန်အယ်လ်ဒီက ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလဆန္ဒခံယူပွဲ၌ အာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင် မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူလူထု အများစုနှင့် အန်အယ်လ်ဒီက လက်မခံနိုင်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ၏ ကြေညာ ချက်၌ ဖော်ပြခြင်းသည် ပြည်သူလူထုကို လှုံ့ဆော်ရာ ရောက်သဖြင့် ရုပ်သိမ်းပေးရန် ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင် များနှင့်တွေ့ဆုံရာ၌ သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းကပြောသည်။
၎င်းက "မနေ့ကဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာ သုံးသပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဖို့တို့ဘာတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တလုံးတပါဒမှမပြောပါဘူး။ No လည်း မပြောဘူး။ Yes လည်းမပြောဘူး။ ပြည်သူလူထုကို လှုံ့ဆော် တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက် ရုပ်သိမ်းပေးပါလို့ပဲ ပြော တယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်လူကြီးတွေကတော့ ဒီဥစ္စာတွေ ဟာ အကုန်လုံးအမှန်အကန်တွေ သက်သေ အထောက်အထား တွေလည်း အကုန်ရှိတယ်။ အဲတော့ ဒီဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ပဲ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာ (၂၂) ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် အန်အယ်လ်ဒီ အထူးကြေညာချက်၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ဆုံး ခေါ်ယူ ဖွဲ့စည်းပေးရန်နှင့် ထိုလွှတ်တော်က တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းကာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအား ပြန်လည်သုံးသပ်ကြရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အာဏာပိုင်တို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် တဖက်သတ် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၈ မေလ ဆန္ဒခံယူပွဲ သည်လည်း ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်၍ အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လိမ်လည် လှည့်ဖြားခြင်း၊ မလျော်သြဇာသုံးခြင်းတို့ပြုလုပ်၍ အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြု ထားသဖြင့် ပြည်သူလူထုအများစုက လက်မခံနိုင်ကြောင်းလည်း အချက်အလက်များဖြင့် ထောက်ပြဝေဖန်ထား သည်။
ထိုကြေညာချက်သည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရအပေါ် ပြည်သူ များက အထင်မှားအကြည်ညိုပျက်စေခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာနှင့် ချစ်ကြည်ရင်း နှီးမှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများကို သိက္ခာကျဆင်းစေခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြသော အများပြည်သူများအား စော်ကားရာ ရောက်စေခြင်း တို့ ရေးသားဖော်ပြထားသဖြင့် ရဲချုပ်က ခေါ်ယူသတိပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြသည်။
ယမန်နေ့က ရဲချုပ်က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံရာသို့ ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် ဦးလွန်းတင်မှအပ အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ဗဟို အလုပ်အမှု ဆောင်ကော်မတီဝင်များဖြစ်သည့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးလှဖေနှင့် သခင်စိုးမြင့်တို့ သွား ရောက်ခဲ့ကြ ကြောင်း သိရ သည်။
၂၀၀၇ ခု ဖေဖော်ဝါရီ (၁၅) ရက်ကလည်း ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (စီအာ ပီပီ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်တို့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ သဘောထား တောင်းဆိုချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်နှင့် စီအာပီပီသည် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေသဖြင့် ပြစ်ဒဏ် (၅) နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင် ကြောင်း သတိပေးခဲ့ဖူးသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မနှစ်က သံဃာထုလှုပ်ရှားမှု ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ရာမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို တရားဥပဒေ အရ အရေးယူရေး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့အတူ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း သွားမယ်လို့ သမ္မတ ကတော် လော်ရာဘုရှ် (Laura Bush) က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းကြတဲ့ လူထုအတွက် မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြွချီဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ သံဃာထုကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အကြိုအထိမ်း အမှတ်အဖြစ် သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှက ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့၊ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ သံဃာထုနဲ့ လူထုကို မြန်မာစစ်အစိုးရက သေနတ်နဲ့ ပစ် ဖြိုခွင်းခဲ့ရာမှာ ၃၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ရ တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက မှတ်တမ်း တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 10:40 PM0comments
ဗုဒ္ဓသားတော်ဆိုတာ..ဘယ်ခါ ဒူးမထောက်၊ ရှန်းရှန်းတောက်တဲ့ သံဃာ့ ဂုဏ်ရည်
Burma Cyclone Donors Appreciation Event - Toronto
Ottawa (Sept. 25, 08) － ‘Burma Cyclone Donors Appreciation’ event is to hold on this Sunday September 28, 2008 at Toronto Burmese Buddhist Temple . Burma Cyclone Relief Committee, comprised ofanumber of Burma support groups, collected approximately $200,000 of donations from Burmese-Canadians and Burma supporters in Canada and channeled it to hundreds of thousands of cyclone victims in Burma through the International Buddhist Monks Organizations (IBMO) and other relief organizations in Burma .
The Government of Canada has so far providedatotal of $25.6 million for cyclone relief in Burma and Canadian civil society organizations raised $11.6 million from public. Provincial and territory governments also donated in separate, and labor unions and faith groups also extended their generosities, amounting in millions of dollars. As the whole country, Canada made the approximate contribution of $40 million for cyclone relief efforts in Burma .
Please see detailed info about the Cyclone Donors Appreciation event in Toronto , and if you need more information, please contact Kyaw Zaw Wai, the head of Cyclone Relief Committee at 416-358-2318.
12 High Meadow Place , Toronto M9L 2Z5
10:00 a.m. Opening Comment from President, International Burmese Monks Organization ( Canada )
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 25 2008 14:01 - မြန်မာစံတော်ချိန်
Posted by အာဇာနည် at 10:08 PM0comments
U.S. Senate professional staff met with MRC representatives
MRC (FW) CC members are meeting with Mr. Keith Luse
Keith Luse, U.S. Senate Foreign Relations Committee senior professional staff member, Cathy Gallmeyer, the director of Sen. Richard Lugar’s Northeast Indiana Office, and Mr. Fred Gilbert,asocial worker met with Monland Restoration Council (MRC) on September 6, 2008 at Mon Buddhist Temple , Fort Wayne where the largest Mon people live in the United States .
At the meeting, MRC updated situations of Mon people in Monland and overseas as well as introduced them Mon history, culture and beliefs. While Nai Thet Lwin, Chairman of MRC ( Fort Wayne ) briefed the history of Mon people, Nai Michael Mon briefed history of MRC and its activities. Nai Kun Yekha presented about human trafficking in Burma , Thailand , Malaysia and Singapore and human rights abuses, land confiscation, rapes and ethnic cleansing policy of SPDC in Monland, especially in Southern Ye Township. Nai Kun Yekha also briefed the NMSP-SPDC cease-fire situations in Burma , the situations of Mon refugees in Thailand and Malaysia . Mr. Luse was surprised to hear about human rights violations in Southern Ye.
Mr. Luse was also aware about human trafficking in Malaysia . During his recent trip to Malaysia , he learned how gangsters, brokers, Thai police and Malay immigration connected each other. He said he had discussed the issues with Malay authorities.
Mr. Luse also briefed on legislation that bans import of jade, rubies and other gems from Burma . The legislature also required the President to sendaspecial envoy to Burma and its neighboring countries in order to put pressure on the Burmese military Junta to step democratic process in Burma .
Sen. Lugar believes that pressure on Burmese military regime should not only come from the U.S. and UN, but also from ASEAN, China , and India . Sen. Lugar hopes that President Bush will appointaspecial envoy to Burma before he leaves the office, “thereby settingafoundation to continue and expand efforts in Burma ,” said Luse.
Rev. Ravika, Secretary General of Mon Sangha Organization of USA metaseparate meeting with Mr. Luse on September 7, 2008 in Sen. Richard Lugar’s northeast Indiana office. Rev. Ravika extensively discussed with Mr. Luse about material support issues which U.S. law ban refugees who have supported armed groups. He requested to wave on Mon refugees who fall into that category.
Finally, MRC urges Luse to put more pressure on Burmese military regime in order the regime to initiate tripartite dialogue with opposition parties and ethnic groups in Burma and to help more Mon refugees from Malaysia and Thailand to come and resettle in the US .
ABFSU-FAC statement for NLD (20) years Anniversary
Posted by အာဇာနည် at 9:56 PM0comments
A year ago the monks of Burma led halfamillion people in peaceful protests around the country, proclaiming to the military regime that peace and freedom must be finally restored to the people. The generals' response to the non-violent calls was extremely brutal; hundreds were killed, thousands imprisoned, many monasteries raided, and many people are still missing.
U Gawsita was one of the leaders of the Saffron Revolution. He speaks about what happened and what he wants the world to do.
Part 1:U Gawsita, Saffron Revolution
Part 2: U Gawsita, Saffron Revolution
uscampaignforburma မှ ဖေါ်ပြပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 2:01 PM0comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:43 PM0comments
ဆူးလေဘုရားရဲ့ မနေ့ ညက ရှူခင်းပါ။ ဒီနေ့ တော့ နအဖ ဗုံးကွဲလို့ ယမ်းငွေ့ဟပ်သွားလေရဲ့။ မနှစ်က ဒီလို အချိန်ပေါ့..
လုံထိန်းတွေ ဘုရားပေါ် စစ်ဖိနပ်တွေ စီးနင်းတက်ကြတယ်။...
ကျူပ် အဖိုးတုန်းက..အင်္ဂလိပ်တွေ ဘုရားပေါ် ဖိနပ်စီးတော့ ဆတ်ဆတ်ခါ အထိမခံဖြစ်တာ..
ကျူပ်တို့ခေတ်ကျဘယ်နှယ်နေပါလိမ့် ..စစ်ကျွန်သက်ဘဲ ရှည်ချင်သလားမသိဗျာ..
ကျုပ်သွေး က ကျုပ်အဖိုးသွေးလောက် မရဲတာသေချာတယ်ဗျို့ . ရှက်တယ် အဖိုးရာ
ဗုံး ကွဲ တာ ကြောင့် ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ...passport ရုံး ပိတ် ထားပါတယ်။
တိုင်းပြည်ကြီးဂျောက်ထဲ ကျနေသယောင်ယောင်.ဟန်ဆောင်ဖောက်နအဖ ဗုံး
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗန္ဓုလပန်းခြံအနီး ပေါက်ကွဲမှုတခု မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀း၄၀ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရပြီး လူ ၄ ဦး ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေ တဦးက ပြောသည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:41 PM0comments
ဟန်ဆောင် ပန်ဆောင်..ထောင်ခါပြနေတဲ့နအဖ..နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမပါသလောက် ရှားမှရှား
မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက အကျဉ်းသားတွေ ထောင်ချီလွှတ်ပေးမယ်လို့ ကြေငြာလိုက်ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ် ဆက်ပြီး လွှတ်ပေးနေတာတွေ ရှိပေမယ့် ဒီကနေ့ ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ အထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပါလာတယ် လို့တော့ မကြားရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မူလက ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုတောင် ထောင်ထဲ ပြန်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတယ် သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
အကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ကိုးထောင်နဲ့ နှစ်ယောက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ကြေငြာ ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံတ၀န်း အကျဉ်းထောင်တွေက အကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လွှတ်ပေးနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် မနေ့တုန်းက လွှတ်တဲ့အထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် နဲ့ အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါ တီကြီးတခု ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အဖွဲ့ဝင် တချို့ အပါအ၀င်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားတချို့ ပါလာခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ ဒီလိုပါလာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကိုတော့ မကြားရပါဘူး။ အခု နောက်ဆုံး အကျဉ်းသားတွေ ဆက်လွှတ်ပေးနေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း ကို မေးကြည့်ရာမှာတော့ -
“ထပ်မကြားဘူး ဒီနေ့လေ။ ထောင်တွေမှာတော့ ၉၀၀၀ကျော်ကိုတော့ ဆက်လွှတ်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား တော့ နောက်ထပ် မကြားဘူး။”
“ဒီနေ့ ပထမဦးဆုံး လွှတ်တာကတော့ မိန်းကလေး အယောက် ၂၀၊ ၂၅လောက် ရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို ထပ်ပြီး စုံစမ်း ကြည့်တော့ သူတို့က ဘာပြောလဲဆိုတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေက နောက်အသုတ်မှာ လွှတ်မှာတဲ့၊ ၄၀။ ၄၀ ပြီးရင် ဒီနေ့အတွက် ပြီးသွားပြီ။ မနက်ဖြန်မှာ များမယ်လို့တော့ ထပ်ပြောတယ်။ အဲဒီထဲမှာတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တယောက်မှတော့ မပါလာဘူး။ ဒီနေ့အတွက်ကတော့။ မနေ့က ဦးရေက ကျွန်တော်တို့ ပျမ်းမျှ တွက်ကြည့်ရသလောက် ၁၅၀၊ ၂၀၀ အလွန်ဆုံး အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့။”
မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေ အများအပြားကို နိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်တွေက သက်ညှာခွင့်ပေး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအထဲမှာ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခံနေရသူ မဆိုသလောက်သာ ပါလာတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ် ရှားသူ တွေဖက်ကတော့ အားရကျေနပ်မှုတော့ မရှိကြသေးပါဘူး။
“သူတို့ လွှတ်တဲ့ သတင်းမှာ ပါတာကိုက ရာဇ၀တ်သားတွေ၊ ပြစ်ဒဏ်ကျတဲ့ သူတွေလို့ ပြောတာကိုး။ နိုင်ငံရေး သမားကို သီးခြား မပြောပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အရ နှစ်ရှည်လများ ထောင်ကျတဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ခံစား ပြီးပြီ။ အဲဒီလို ခံစားပြီးတော့ ကျော်နေတဲ့ သူတွေက အများစု။ တော်တော်ကို မကောင်းတာပေါ့။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နဲ့ဆိုရင် မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင်တောင် တော်တော် မကောင်းတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လာတဲ့ သူ တွေအတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းသားပါတယ်။”
မနေ့တုန်းက နိုင်ငံတ၀န်းမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေက ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာတော့ သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၇) ယောက်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်း အန်အယ်လ်ဒီ က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ မနေ့တုန်းက ဒီလွှတ်ပေးတယ်လို့ ပြောဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ်နဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ ဗိုလ် ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန် ကိုတော့ အာဏာပိုင်တွေက ပြန်လွှတ်မပေးခဲ့ဘူး ဆိုပြီးတော့လည်း သတင်းတွေ ထွက် ပေါ်နေပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေ အပြောအရကတော့ ကသာထောင်မှာ ထောင်ကျနေတဲ့ ဦးဝင်း ထိန်ကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး မိသားစုကို အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ အစီအစဉ် အပြောင်း အလဲရှိတဲ့အတွက် လွှတ်မပေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အသိပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အန် အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း ကတော့ မိသားစုနဲ့ တိုက်ရိုက် အဆက်အသွယ် မရတဲ့အတွက် တိတိ ကျကျ မသိရသေးပေမယ့် ဒီသတင်းထွက်နေတာ ကြားရတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့လည်း မနက်က သတင်းကြားရတယ်။ သူ့ရဲ့ ဇနီးက မန္တလေးကနေ သင်္ဘောအချိန်နဲ့ စောင့်နေ တာ။ နောက် ကသာ က လှမ်းဆက်တယ်။ ကသာ က တက်လာတော့ ပြန်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သဘော လို ပြောနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တိုက်ရိုက်မရတော့ confirm တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီ သတင်းတော့ ကြားပါတယ်။”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေဖက်ကတော့ အကျဉ်းသား ကိုးထောင်ကျော် လွှတ်မယ့်အကြောင်း မနေ့တုန်းက နိုင်ငံပိုင် သတင်း မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်၊ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ထုတ်ပြန်ပြောဆို တာမျိုးတော့လည်း မရှိပါဘူး။
Posted by အာဇာနည် at 7:36 AM0comments
ယခုလ ၁၂ ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဗီဒီယိုရုံတရုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ လူ ၂ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု စစ်အစိုးရသတင်းစာက ရေးသားထားသည်။ [Top]
Posted by အာဇာနည် at 7:26 AM0comments
ဦးဝင်းထိန် ကို ထောင်လွတ်ပေးခဲ့ပြီး. မိသားစုတွေကို လာခေါ်ဖို့ အကြောင်းကြားပြီးမှ..ဘွာတေး.. လူမွှား တွားဒါ။
မင်းအကောင်ကြီးတယ် ၂ ခါလျှောက်လို့ရေနွေးအိုးဖြတ်လျှောက်တာ မသေတဲ့ ကနန်း ကြီးကို ကပ္ပိယကြီးကပြောသလိုဘဲ..မနေ့ကလွတ်.ဒီနေ့အတွင်းထဲ ပြန်ထည့်ထားတယ်. ကသာ ထောင်မှာတဲ့ ဗျာ...ဘယ်ကလာ..ချစ်လွန်းလို့ဟုတ်ရမလည်း ။
ရဲရဲတောက် ဦးဝင်းထိန် ရဲ့ DVB interview ကြောင့်ပါ။ ဒီလူတော့ ပြန်ချူပ်မှဖြစ်မယ်.. စိတ်ပြောင်းသွားကြတယ်..အော် လူယုတ်မာတွေ များတယ်ကြောက်တာလားဗျ။
Posted by အာဇာနည် at 2:57 AM0comments
စစ်ကျွန် မခံချင်..ဘုန်းကြီးခေါင်း မထုချင်တဲ့ မထုရက်တဲ့ ဗမာလေးတွေ အရင်းမစိုက် လှေထိူး လိုက်တာ..သင်္ဘောနစ်သေကုန်ပါတယ်။ အမျိုးတွေ ပါမပါ စုံစမ်းကြပါဗျို့ ။ ကိုရီးယား သင်္ဘောဖြစ်ပြီး ဗမာ ဂယောက် ပါသွားတယ်တဲ့ဗျာ..
All 17 missing after South Korean cargo ship capsizes
SEOUL (AP): The Coast Guard saysaSouth Korean freighter has capsized off Macau's coast, leaving all 17 sailors missing.
It said the 4,000-ton ship was found capsized byaChinese rescue vessel earlier Wednesday in waters some 35 miles (57 kilometers) southwest of Macau.
A Chinese search-and-rescue operation is under way but has not found any of the missing crew members _ eight from South Korea, eight from Myanmar and one from Indonesia.
The South Korean cargo ship was sailing towardaSouth Korean port after departing Vietnam
Posted by အာဇာနည် at 2:49 AM0comments
စွမ်းအားရှင်တစ်ကောင်နဲ့ နိဂုံးပါ..သံသရာဆိုတာ..မဆိုင်းတဲ့အကြောင်း သတိသံဝေဂရစေချင်ကြပါတယ်.။ ဘယ်လောက်စားနိုင်မလဲဗျာ.သေတော့ လက်ပလာနဲ့ သေရတာချည်းပါဘဲ။
Posted by အာဇာနည် at 2:46 AM0comments
Posted by အာဇာနည် at 2:42 AM0comments
ကြည့်လုပ်ဥိးလေဗျာ အရပ်ကတို့ ..လူကောင်းတွေ မျိုးပြူတ်နေကြပြီ
President Bush and first lady Laura Bush listen to U Kovida,amonk from Myanmar, after posing foraphoto with political dissidents on Governors Island on Tuesday in New York. Bush, whose administration has hadatesty relationship with the U.N., made his final address to the General Assembly. AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS
( အရူးကြီးသန်းရွှေ အရေးမလုပ်တဲ့ ဗမာ ဘုန်းကြီး..သူထက်သာတဲ့သူ က အရေး လုပ်ပါ့ဗျာ။ သူမခေါ် ဘာအရေးတုန်း..)
Bush focuses on terrorism in final U.N. speech
Posted by အာဇာနည် at 2:34 AM0comments
တကတည်း အကျိုးနည်းတော်..ကျုပ်အသံဘဲ လူကြားတယ်..ရှက်ကိုမရှက်ဘူး.
မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားဖို့အတွက် အိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံတွေ၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့က တွန်းအားပေးပါလို့ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် (Laura Bush) က တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သမ္မတဘုရ်ှနဲ့ သမ္မတ ကတော် လော်ရာဘုရ်ှတို့ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ နေ့လယ်စာစားရင်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဒီမို ကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေထဲမှာ မြန်မာပြည်က သံဃာတော်တပါး ဖြစ်တဲ့ အရှင်ကောဝိဒလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မနှစ်က သံဃာထုလှုပ်ရှားမှု၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကြီးအပြီး ဘေးလွတ်ရာ တိမ်းရှောင်ခဲ့တဲ့ သံဃာတပါးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အစိုးရတရပ် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း က ကူညီလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း အရှင်ကောဝိဒက မိန့်ကြားခဲ့တာကို အိမ်ဖြူတော်က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဗျို့ဦးဝင်းထိန်...ဘယ်မလဲ..နတ်ဖွက်တာ မဟုတ်ပါဘူးထင်ရဲ့
မနေ့ ကဘဲထောင်က.ကောင်းပြီကောင်းရက်. ဦးဝင်းထိန် ကို လွတ်ပေးခဲ့တယ်..
အခု လာပြန်ခေါ်သွားပြန်ပြီတဲ့။ နအဖဘက်မှ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဗျား။ ကြည့်ရတာ လာတဲ့ ခါးပိုက်နှိုက် နှစ်ကြီးကျ..မုဒိန်းကောင်..နံမည်တူ..ဦးဝင်းထိန် နဲ့ မှားလွတ်မိတယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါကြောင့် ကြံဖွတ်က..သူ လူတယောက်ရော့ မှာ စိုးတာနဲ့ ပြန်ခေါ်ပြီး လူလဲတာ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်.
ခုထိ အဆက်အသွယ်လည်း မရ သေးပါခင်ဗျား. ထွေးပြီးသား တံတွေးမျိုတာ နအဖ ပါခင်ဗျား. ထွက်လာတဲ့လူတွေ အပြင်မှာ..လွတ်လွတ်လပ်လပ်..ဓမြတိုက်ခွင့် လိုင်စင်ရနေပါတယ်။ နအဖက..ငါလခ မပေးနိုင် ခိုးစား တိုက်စားကြပေါ့ ။ ကျွန် ခေတ်ဆိုတာ..ဒါမှမဟုတ် ..ဘာများဖြစ်နိူုင်ပါသေးသလည်း. အသွားမတော် တစ်လုတ်ဗျာ။ စစ်အာဏာရှင် လက်ထက်.သူသူ ကိုယ်ကိုယ် ဘုရားသာတနေကြဗျို့ ။
အော် တိုးတိုးတိတ်တိတ် လက်တို့ပြောရဦးမယ်ဗျ..စစ်တပ်နဲ့ ရဲကလည်း..အနူကြမ်းစီး ဓါးပြ တိုက်သေးတယ်နော်..အချီကြီးဗျ..စိမ်းလဲ့ကန်သာလေ..သိတယ်ဟုတ်။
• ၀မ်းလဲမသာ ပီတိလဲမဖြစ်
• စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်
• လွှတ်မြှောက် အကျဉ်းထောင်
• ဦးဝင်းတင့်ရဲ့  သမာစိတ်ဓာတ်
• ရဲ ရင့်ငြင်းဆို ပြောကြားခဲ့
• နာရီပိုင်းခြား လွှတ်လပ်တွေ့ဆုံ
• သူ့အသံကို ကြိုဆိုလျက်။
• သူ့အသံက ရှေ့ ဆက်တိုက်ပွဲ
• ဒီမိုကရေစီအရေး ကျရာတာဝန်
• ပေးရာဝန်တာ ညီညာပူးပေါင်း
• တာဝန်ကိုယ်စီ အမြဲတစေ့
• လက်တွဲညီညာ သူ့အသံက
• အနာဂတ် တိုင်းပြည်အရေး
• ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ
• နိုင်ငံရေး အကျဉ်သား
• အခုချက်ချင်း လွှတ်မြှောက်စေဖို့
• သူ့ -အသံက- ( စု- လွှတ်- တွေ့ဆုံ )
• မီးမောင်း ထိုးပြ
• သူအသံက ကျတော်အား
• ဆုံးမကြပါ ဝေဖန်ပါနော်
• အကြံပြုပါ မကောင်းမေတ္တာ
• ကောင်းရာညွန်ဖို့ သူ့အသံက
• ၁၉ နှစ်ကျော် ခန္ဓာကိုယ်ကို
• ဟံသာဝတီ စိတ်ဓါတ်ဟေ့
• လွှတ်မြှောက်နေဆဲပေ။
• သူ့အသံက ဒီမိုကရေစီအရေး
• မေ့မရတဲ့ ဟံသာဝတီသတင်းစာ … ဟေ့
• ဦးဝင်းတင့်အား ဂုဏ်ပြုပါ၏။
kendo: hi,အာ ဇာ နည် အ ပေါင်း တို့။ သူ ခိုး ဓါး ပြ ခါး ပိုက် နှိုက် ၊ လူ ဆိုး လူ မိုက် အများ စု ပါ သော ထောင် ခါ မှု နဲ့၊ မ ရှေး မ နှောင်း မှာ ၂၃ နေ့က ၊ ဗိုလ် ချုပ် ဈေး နဲ့york road ကို ကူး တဲ့ ၊ သံ လမ်း ဖြတ် တံ တား ပေါ် မှာ ၊ည နေ ၄း၃၀ လောက် က ဓါး ဖြင့် ထိုး ပြီး လု ယက် မှု တစ် ခု စ တင် ဖြစ် ပွါး ပါ တယ် ။ အ ကျူး လွန် ခံ ရ သူ မှာ ၊ ဂုဏ် ထူး တန်း ကျောင်း သူ တစ် ဦး ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါ သည် ။
kendo: စား ၀တ် နေ ရေး ခက် ခဲ နေ ချိန် ၊ အ မေ က မွေး ထောင် က ကျွေး နေ ရ တဲ့ ၊ လူ မိုက် များ ၊ ထောင် ခါ သည့် အ ထဲ များ စွာ ပါ လာ ပါ သည် ။ ပြင် ပ တွင် လု ယက် စား ရုံ မျှ အ ပ ဘာ မှ အ လုပ် မ ရှိ သော မြန် မာ ပြည် အ ခြေ အ နေ ကြောင့် ။ လူ မိုက် များ က လု ယက် စား ဖို့က လွဲ ပြီး ။ ဘာ မှ လုပ် စ ရာ မ ရှိ ပါ ။ပြည် သူ များ သ တိ ရှိ စေ ချင် ပါ သည် ။
c box သတင်းမှ
Posted by အာဇာနည် at 4:43 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 3:56 PM0comments
Burma Campaign UK. မှ..ရယူပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 3:46 PM0comments
ဆက်လက် တိုက်ကြစို့ ။
မြည် ဆော်တီးစေဖို့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:26 AM0comments
ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင်
ဤမှောင်တိုက်တွင်းမှနေ၍ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတတ်သော
ငါ၏ စိတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသည့်
နတ်သိကြားတို့အား ငါကျေးဇူး ဆိုပါ၏။
လောကဓံတရား တို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော
ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒဏ်ချက် တို့ကြောင့်
ငါ့ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီနေ၏
ဤဒေါသ လောဘတို့ ကြီးစိုးရာဌာန၏ အခြားမဲ့၌ကား
သေခြင်းတရားသည် ကြောက်ဖွယ်ရာ ငံ့လင့်လျက်ရှိ၏။
သို့သော်လည်း ငါ့အား မတုန်လှုပ်သည်ကိုသာ တွေ့ရအံ့။
နောင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက်သည်ကိုသာ တွေ့ရအံ့။
သုဂတိသို့သွားရာ တံခါးဝသည် မည်မျှပင် ကျဉ်းမြောင်းသည် ဖြစ်စေ
ယမမင်း၏ ခွေးရေပုရပိုဒ်၌ ငါ့အပြစ်တို့ကို
ငါသာလျှင် ငါ့ကံ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်၍
ငါသာလျှင် ငါ့စိတ်၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်လေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အိုးဝေ ညိုမြ (တွဲဖက်ရေးသည်)
( ၁၉၃၆ခုနှစ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆) အမှတ် (၁) ခေါင်းကြီးပိုင်း)
မူရင်းကဗျာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 2:18 AM0comments
အသတ်ခံရတဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက်ရဲ့ video လက်သိပ်ထိုး ရောငိးလိုသူ အဖမ်းခံရခြင်း။
Man nabbed for attempted extortion over journalist slain in Myanmar
added September 23, 20083views0 responses
http://www.japantoday.com/category/cri... TOKYO —
A man was arrested Monday for allegedly extorting cash fromareporter after the reporter refusedadeal to hand overavideo allegedly taken by video journalist Kenji Nagai, who was gunned down by Myanmar security troops last September, the Metropolitan Police Department said Tuesday. The man, identified as Maung Win Min Htun,aMyanmar national who lives in Tokyo’s Katsushika Ward, denies the allegation, according to police.
According to the investigation, the suspect contacted the 33-year-old reporter with Tokyo-based APF News Inc in December, for which Nagai was working, saying he could obtain video footage Nagai had taken but he would need money to do so. After the reporter refused the deal, the suspect is alleged to have attempted to extort money from the reporter ataTokyo restaurant Jan 14. He is quoted as saying he would resort to taking some action unless he was paid around 500,000 yen. Nagai was killed while videotaping anti-government demonstrations in Myanmar. The Myanmar government has not returned his video camera and tapes, despite repeated requests by his relatives. http://current.com/items/89330167_man_nabbed_for_attempted_extortion_over_journalist_slain_in_myanmar မှ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 7:00 PM0comments
" ဒီမို ကရေစီ မရမချင်း ဆက်တိုက်သွားမှာဘဲဟေ့"
ဒီနေ့ ထောင်က လွတ်လာသူဦးဝင်းတင် ရဲ့စကားပါ ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။ လေးစားပါတယ်။
ဒီ နေ့ လွတ်လာသူများ
(1) သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်
(2) ဒေါက်တာ မေ၀င်းမြင့်
ဘယ်မလဲဦးအုန်းသန်း။ ဘယ်မလဲ မင်းကိုနိူင်နဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ ( ရွေးကောက်ပွဲမှာ လောက်ကောင် အေးလွင်နဲ့ယှဉ်ရွေးမှာ စိုးလို့ ထင်ပါရဲ့..) ဘယ်မလဲဒေါ်စုစုနွေးနဲ့ နီလာသိန်း..
Subject: BREAKING NEWS of AAPP
U Win Tin, 78 was arrested on July 4, 1989, He had been in prison for over 19 years.
Dr. Than Nyein, 72 and Dr.May Win Myint, 59 were arrested in September 1997. They were given7years imprisonment. They completer their imprisonment in 2004 but they were arrested again under state protection act " Article 10/a. Both of them had been in prison for almost 11 years.
U Khin Maung Swe, 67 was arrested in August 1994. He was given7years imprisonment. Even though he was released its7years imprisonment in 2001, he had to continue his imprisonment until today. He had been in prison for over 14 years.
U Win Htein, 67 was arrested on May 21, 1996. He had been in prison for over 12 years.
U Aung Soe Myint, 57, was arrested on August 31, 2003. He had been in prison for over5years.,
More information: contact to Ko Tate at 66-(0)81-2878751
Bo Kyi at 66-(0)81-3248935
Posted by အာဇာနည် at 6:50 PM0comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:25 PM0comments
NEJ/ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
မြန်မာကို အရေးယူမည့်အချက်များမပါရှိဘဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ထပ်မံတောင်းဆိုမည့် လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြေညာချက်သာ ထွက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း စက်တင်ဘာ (၁၀) ရက် ထုတ်ပြန် သည့် လုံခြုံရေးကောင်စီ အစီရင်ခံစာ၌ ခန့်မှန်းရေးသားထားသည်။
မြန်မာအစိုးရအား ဒဏ်ခတ်ရေး ဆွေးနွေးချက်များ မှေးမှိန်သွားပုံရသည့်အတွက် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ယခင် ကြေညာချက် (၂) ခုပါ အချက်များအပါအ၀င် သံတမန်ရေးနည်းလမ်းများသုံးရန် ဖိအားပိုပေး လာနိုင် သည်ဟု အစီရင်ခံစာက သုံးသပ်သည်။ မြန်မာ့အရေးကို လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆွေးနွေးမည့်အချက်များ၌ ထည့် သွင်း နေခြင်းကို တရုတ်ကဆက်ပြီး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေသည့်ပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရအား လုံခြုံရေး ကောင်စီက အရေးမယူရေးကို တရုတ်က လိုလားသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီက ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းများအနက် လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် များအနေဖြင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ၏ ဆွေးနွေးမှုကို နားထောင်ပြီး မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ မလုပ်ဘဲ သ ဘောထားထုတ်ပြန် နိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် စစ်မှန်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လုပ်ဆောင်ရန် တို့ ပါဝင်သည့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ယခင်ကြေညာချက် (၂) ခုပါ အဓိကအချက်များကို ထပ်မံကြေညာနိုင် ကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ အဓိကအချက်များကို ပြန်လည် အလေးထား ထုတ်ပြန်နိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ကြေညာချက်၌ အားလုံးပါဝင်သည့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့် မြတ်ရေးလုပ်ဆောင်ရန်၊ ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာ့အရေး ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဒေါ် အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် စစ်မှန်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ဆောင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူ့ အခွင့် အရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်သူလူထု အတွက် စီးပွားရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု လိုအပ် ချက်များကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရန်တို့ တောင်းဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ထုတ်ပြန်မည့် ကြေညာချက်၌ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲ အပေါ် သဘောထားနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန်ကဲ့သို့ ကိစ္စများလည်းပါဝင် နိုင်ပြီး အတွင်းရေး မှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မတိုင်မီ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ကြိုတင်တွေ့ဆုံရန်တို့ ပါရှိနိုင်သည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာကို သြဂုတ် (၁၈)မှ (၂၃) ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်ခဲ့သည့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ် အပြီး၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုခရီးစဉ်၌ ကုလသမဂ္ဂ၏ တောင်းဆိုချက် (၅) ချက်ကို မြန်မာအစိုးရက ပိုမို သ ဘောပေါက် လက်ခံလာသဖြင့် ထိုခရီးစဉ်ကို မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပိုမိုအကောင်းမြင်သည်ဟုလည်း အစီရင် ခံစာ ၌ ရေးသည်။
မြန်မာအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိကအရေးပါသည့် အချက်များကို စဉ်းစားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံသွားရန်များသည့် အတွင်း ရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ ခရီးစဉ်မှ ခိုင်မာသည့် အောင်မြင်မှုရအောင် မည်သို့လုပ် ရမည် ဆိုသည့်အချက်အပါအ၀င် ဘန် ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံသွားခြင်းသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံကို ထောက် ခံခြင်းဟု အသုံးချမခံရအောင် မည်သို့ လုပ်ရမည် စသည့်အချက်များပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ကုလသမဂ္ဂသည် မြန်မာနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် တိုးတက်မှုမရှိဆိုသည့် မကောင်းမြင်သတင်း ပျံ့နှံ့မှုကိစ္စအတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီက မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ဆိုသည့် ကိစ္စ ဖြစ်သည်ဟု ရေးထားသည်။
Posted by အာဇာနည် at 3:11 PM0comments
စစ်အစိုးရက ယနေ့ လွှတ်ပေးသော အကျဉ်းသား ၉၀၀၂ ယောက်တွင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃ ဦး ပါရှိသည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကပြော သည်။
အသက် ၇၈ နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော ဦးဝင်းတင်သည် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ၁၉ နှစ်ကျော်ကြာ နေခဲ့ရ ပြီးနောက် လွတ်မြောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာမေ၀င်း မြင့် နှင့် တောင်ငူလွှတ်တော်အမတ် ဦးအောင်စိုးမြင့်ဦး တို့ကိုလည်း စစ်အစိုးရက လွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်း က ပြောသည်။
ဦးဝင်းတင်ကို ပုံမှန် ထောင်ဝင်စာ သွားရောက် တွေ့ဆုံလေ့ရှိသူ မိတ်ဆွေကြီး ဦးမောင်မောင်ခင်ကတော့ အင်း စိန် ထောင်ဗူးဝတွင် စောင့်ဆိုင်းလျှက် ရှိကြောင်း မဇ္ဈိမသို့ ပြောပြသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဦးအေးသိန်းသည် ကလေး အကျဉ်း ထောင်မှ ယနေ့ လွတ်မြောက်လာသည်ဟု မဇ္ဈိမက စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ဦးဝင်းတင်၏ မိတ်ဆွေကြီး ဦးမောင်မောင်ခင် ပြောကြားချက်
လွှတ်တော့ မလွှတ်သေးဘူးဗျ။ ထောင်ဗူးဝတော့ ရောက်နေပြီ။ မြင်ခဲ့တဲ့ လူတွေကတော့ သေချာပြောတာဘဲ။ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဒေါက်တာ မေဝင်းမြင့် တို့၊ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေပေါ့ဗျာ။ နှစ်တွေ ထပ်ထပ် တိုးနေတဲ့ သူတွေကိုပေါ့ဗျာ။
ကျနော် ကြားတာကတော့ ၁၂း၃ဝ နာရီခွဲ ၁ ချက်တီးလောက်မှာ လူကြီးတွေက မိန့်ခွန်းချွေပြီး လွှတ်မယ်လို့ ပြောမယ်။ သတင်းတွေ လိုက်ပြီး စုစည်း လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သေချာဘို့ တော်တော် နီးစပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကတော့ လွှတ်ပြီဆိုမှ လွတ်ပြီလို့ ကျနော်တို့ ယုံရမှာပေါ့နော်။
၂ဝ ရက်နေ့က ကျနော် သူ့ကို သွားတွေ့တယ်။ သူသိတယ်။ သူတို့ ထောင်သားတွေကို လွှတ်လိမ့်မယ်ကွ၊ အို၊ နာ၊ ကျိုး၊ ကန်း တွေကိုတဲ့။ အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေ၊ နာမကျန်းတဲ့ သူတွေ။ ငါတော့ အဲဒါကို ငြင်းထားတယ်။ ငါ့ကို နိုင်ငံရေးအရ ဖမ်းရင်တော့ နိုင်ငံရေးအရ လွှတ်ရမယ်လို့ ကျနော် ပြောထားတယ်တဲ့။
သူ့ကို နိုင်ငံရေးအရ လွှတ်ရင်တော့ သူထွက်လာမှာပါ။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်ကလည်း မိန့်ခွန်းတွေ ပါတွေချွေ၊ သူ့အကြောင်းတွေ ပါတွေပြော၊ ထမင်းတွေ ဘာတွေ ကျွေးပြီးတော့ အထဲ ပြန်ခေါ်သွားတာ။
ကျနော်က ဒီမှာ တယ်လီဖုန်းတွေ စောင့်နေတာ။ လွှတ်လာရင် အစိုးဘက်က လူကြီးတွေ ကျနော့်အိမ်ကိုဘဲ လာပို့ပေးမှာပါ။ ကျနော့်အိမ်က ထောင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဘဲလေ။ ဒီမှာလည်း စောင့်နေကြတာ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးသိန်းညွှန့် ပြောကြားချက်
ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဒေါက်တာ မေဝင်းမြင့် တုိ့ ကျနော်အမှုသည်၊ ကျနော် လိုက်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ လွတ်လာပြီဆိုတော့ ကျနော် အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျနော် ရှေ့နေအဖြစ် နှစ်ခု ပြောချင်တယ်။ သူတို့ ဘယ်အကြောင်းနဲ့ပဲ လွတ်လာ၊ လွတ်လာ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ထောင်ချ၊ အချုပ်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေကိုရော လွတ်လာတာကိုရော မြင်ချင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားတွေ အပါအဝင် လွတ်လာတယ်ဆိုတော့ ဘာဘဲ ပြောပြောဗျာ၊ အမျိုးသာ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ဟြာ ဖစ်ပါစေဗျာ။ ကျနော် ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်တယ်။
မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလဲ ၂း၁၀ မိနစ်တွင် ဦးဝင်းတင်၏ မိတ်ဆွေကြီး ဦးမောင်မောင်ခင် ပြောကြားချက်
"နောက်ဆုံး ကြားရတဲ့ သတင်းကတော့ ထောင်ဗူးဝတော့ ရောက်နေပြီလို့ ကြားတယ်။ ညနေပိုင်းမှ လွတ်မယ်လို့ ကြားတယ်။
"ခုက လွှတ်တော့ လွှတ်နေတယ်ဗျ။ ခါးပိုက်နိုက်တွေ၊ သူခိုးတွေ၊ မှောင်ခိုတဲ့ မိန်းမတွေ၊ ချဲအမှုတွေနဲ့ ဖမ်းထားတဲ့ သူတွေလည်း တသုတ်ပြီး တသုတ် လွှတ်နေတာပဲလေ။
"လွတ်နေတာကတော့ ၉ဝ၊ ၁ဝဝ တော့ မကတော့ဘူး။ ထောင်ကားတွေနဲ့ လိုက်ပို့နေတယ်။ လုံခြုံရေးတွေတော့ မရှိပါဘူး။ ဒီနေ့တော့ လွှတ်မဲ့သူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အပြင်မှာ စောင့်နေတာတွေတော့ အများကြီးဘဲ ရာဂဏန်းတော့ ရှိတယ်။ တခြား အစောင့်တွေတော့ မရှိပါဘူး။
"ဦးဝင်းတင်ကို သွားစောင့်တာတော့ ကျနော်တို့ မိသားစုဘဲ ရှိမယ်။ နောက်ထပ် တနာရီခြား ခေါ်ပေးပါ။"
နောက်ဆက်တွဲကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်သည်။
Posted by အာဇာနည် at 2:48 PM0comments